Home Wararka Farmaajo oo Qatar ka codsaday in lala heshiisiiyo Kenya! Maxaa soo kordhay?
Sida MOL loo xaqiijiyay Farmaajo ayaa sadaxdii asbuuc ee ugu danbeeysay waxa uu da’daal ugu jiray sidii loola heshiisiin lahaa dowlada Kenya iyo madaxdeeda. Intii uu ku sugnaa dalka Qatar waxa uu madaxda dalka Qatar ka codsaday inay markale kala dhex galaan isaga iyo madaxda Dowlada Kenya.
Farmaajo ayaa ka cabsi qaba in dowlada Kenya si toos ah saameyn ugu yeelato doorashada ka socota Soomaaliya. Dhanka kale Farmaajo ayaa walwal ku abuurtay shirarka u dhaxeeya beelaha Ogaadeen iyo Mariixaan ee ka socda magalaada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirarkaan oo uu Farmaajo isku dayay in uu hor-istaago ayaa waxgaradka beesha Mariixaan waxa ay ku adkeeysteen in dantooda ku jirto in ay la heshiiyaan beesha Ogaadeen iyo dowlada Kenya oo in mudo ah xurfag ka dhaxeeysay.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Farmaajo uu balan qaaday in uu diyaar u yahay inuu wadahadal cusub ka galo dacwada badda Soomaaliya iyo Arimaha Qaadka hadii dowlada Kenya diyaar u tahay in ay la xaajoodaan isaga iyo kooxaha uu ku shaqeeysto.
Dhanka kale dowlada Kenya ayaa ka biyo diiday in ay Farmaajo wadahadal la furaan xiligaan kala guur ah iyaga oo u arka shaqsi khatar ku ah ku nabada geeska African iyo tan Soomaaliya. Dowlada Maraykanka iyo dowlada Kenya ayaa qaba Soomaaliya aragti iskumida, taas oo ah in Soomaaliya loo helo hogaan cusub oo dib u heshiisiin ka dhex sameeya Soomaalida dhexdeeda, isla markaana soo celiya xiriirka wadamada dariska la ah Soomaaliya oo ay ku jirto Kenya.
Previous articleXalka kaliya ee looga gudbi karo Doorashada Boobka ah & muddo kororsiga dadban
Next articleFarmaajo oo ku adkeeysanaya in lagu martiqaado (Saudi & Africa Summit)-Abriil 2022
Marwada Koowaad ee dalka Turkiga Emina Erdogan oo Marwo Saynab Macallin...
Bad kakacay Suuqa Magaalada Jowhar&Faah-faahino kasoobaxaya